Power High Ngokukhokelwa
LED EZIPHAKAMILEYO BAY Case
LED Izikhukhula LIGHT Case
Case nokwe KOKUKHANYA
isibane E Series Street
S ukukhanya series street
All in solar ekukhanyeni isitrato sasinye yakhokelela
LED ukukhanya corn
ETL corn isibane series
Manzi isibane corn
series Mini corn isibane
ukukhanya LED Flood
A Series UFO bay high ukukhanya
E series UFO highbay ukukhanya
LED Wall pack ukukhanya
Tube LED Ukukhanya
Iqhubu LED Ukukhanya
Yintoni ukukhanya ingqolowa?
inkqubo Uphuhliso ukukhanya Street
isisombululo lokukhanyisa Stadium
Ntoni ukuma LED?
LED mfutshane ukuba diode ukukhanya-esikhupha.
musa LED zihlala zisebenza ixesha elingakanani?
Ii-LED badumileyo ngokuba iimveliso kakhulu ixesha elide. LED abaninzi ubomi rated iiyure ukuya ku 50,000. Oku malunga amaxesha 50 ngaphezu kokuba yale igqengezelayo eqhelekileyo, amaxesha 20-25 ngaphezu kokuba halogen eqhelekileyo, kwaye 8-10 amaxesha elide ngaphezu CFL ekuso. Wasebenzisa iiyure ezili-12 ngosuku, ibhalbhu 50,000 iya kuhlala iminyaka engaphezu kwama-11. Wasebenzisa iiyure 8 ngosuku, uya kuhlala iminyaka 17!
njani LED ingasetyenziswa phi?
Zinokusetyenziswa phantse naphi na. abangamalalela LED sele ziyafumaneka iintlobo kwebhalbhu ezifana-A imilo, reflectors Par, reflectors MR, zokuhombisa, undercabinet, kwaye ngaphezulu. Xa asetyenziswa dimmers, iinkqubo ingakumbi ukufiphala ezixhasa iibhalbhu ezininzi, siphakamisa livavanya LED ezimbalwa kuqala ukuvavanya ehambelanayo.
Ziziphi iingenelo ukuguqukela LED?
Izinto eziluncedo ze nokusebenzisa LED baninzi. Nazi nje ezinye zeengenelo: LED zisebenzisa umbane ngaphantsi kakhulu kunezinye iibhalbhu, kufuneka kakhulu ubomi elide rated, ukuvelisa ubushushu mncinane kakhulu, musa ayikhuphi UV okanye infrared, kuba akukho imetyhuri, abanganyangekiyo yothuse kunye ukungcangcazela, kwaye zisebenza ngempumelelo ezindaweni obabubanda kakhulu. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi iingenelo LED,
Kutheni LED zibiza ngaphezu kwezinye iintlobo kwezibane? Ngaba kunomvuzo?
LED isekhona iteknoloji entsha, yaye iindleko zokwenza imveliso esemgangathweni zisephezulu. Nakuba kunjalo, amaxabiso kuye kwehla kakhulu ukususela kwiminyaka nje embalwa edlulileyo kunye namaxabiso kulindeleke ukuba siqhubeke iyehla. Ekugqibeni ukuba ii-LED ulingana iindleko ezongezelelekileyo, kuba luncedo ukujonga indleko asebenza ibhalbhu ukongeza ixabiso phezulu-ngaphambili. Le yokonga amandla yaqaphela utshintsho ku LED kuthetha ukuba extra iindleko up-ngaphambili udla ihlawulwe umva kunokuba ngokukhawuleza, kwaye ngumoya ukonga imali ngaphezulu kobomi le ebhalbhu. Nanku umzekelo: ngokuba umthengi yokuhlala ekusenokwenzeka kuba nalo ukhanyiso luhlale lulayitile iiyure nje-10 ngeveki ñ payback ungaphezu kweminyaka eli-10. Kwelinye icala, ithengisa okanye yokutyela umxhasi Lowo ulitshisileyo izibane iiyure 90-100 ngeveki iya kubala payback yabo kwi $ 70 LED Par ukuba kweenyanga ngaphantsi kwe-18. Ukuthatha jonga kwi payback uqikelelo bakho niya kuba ingqalelo xa kusenziwa isigqibo ukuba LED ilungile kuwe.
Ngaba ngokwenene kukho umahluko phakathi $ 10 LED kunye $ 50 LED?
Ewe. Ii-LED efana kakhulu electronics nomgangatho ebalulekileyo. Ukuze libe LED ukuze sisebenze kakuhle kwaye ikhuphe ophumayo ukukhanya owamkelekileyo, onke amacandelo kufuneka yakhiwe ukuba ihlale ihleli. Ku iyingcamango elungileyo ukuthenga evela kumenzi kunye nomthengisi ukuba sele uqinisekile uya kuma emva imveliso. Ukuba ungathanda ukufunda okungakumbi malunga nodweliso nendlela ngendleko ephantsi-eyenziwe LED aqhuba nxamnye imveliso top-ezisemgangathweni,
Ingaba i LED uza ukuvelisa ukukhanya ngokwaneleyo ukuze endaweni ibhalbhu yam ngoku?
Kuba izicelo ezininzi, ewe. Off-i-kwithala iimveliso LED ngoku ngokuthembekileyo ukubuyisela equivalents ezingqengezelayo of watts ukuya ku-100, yaye okukhethekile ziyafumaneka ukubuyisela wattages ephakamileyo.
Yintoni umgangatho LED ukukhanya?
Ukuba uthenga imveliso umgangatho, umgangatho ukukhanya kakhulu. Umbala Ukwenzelwa Index (liqu) jikelele kusetyenziswa umlinganiselo umgangatho ukukhanya ngomlinganiselo ukusuka ku-1-100. Uninzi LED babe liqu rating of ubuncinane 80, yaye abaninzi aziswa 90 nangaphezulu.
Indlela green LED?
Ii-LED green kakhulu. Kuba Okokuqala, asebenzisa umbane ngaphantsi kakhulu nezinye iimveliso ezininzi ukukhanyisa. Oku kuthetha ukuba umbane ngaphantsi ekufuneka bavelise ukusebenza kubo, yaye oko kukhokelele ezikhutshwayo asezantsi ukusuka izityalo amandla, ingakumbi kwiindawo apho izityalo ngamalahle zizo eqhelekileyo. Ngokungafaniyo CFL, ukuba ziqulathe akukho phephandaba. Ngenxa yokuba ubomi babo kudala, nabo ukunciphisa inkunkuma eqinileyo: Ukuba indawo ziqhelekileyo zigqengezelayo kunye LED, uya kuthintela ibhalbhu iyure yale igqengezelayo amahlanu 1,000 ukuba kulahlwa. Ukongezelela, ukuvelisa ubushushu encinane kakhulu kwaye sehlise usebenziso lwe amandla ezinxulumene HVAC. I-US Department of Energy liye kuqikelelwa ukuba ukwanda ukwamkelwa LED kwiminyaka eli-15 ezayo babeya kunciphisa imfuno umbane ukusuka Izibane ngama-62 ekhulwini, ukunqanda million 258 metric tons ukukhutshwa kwekhabhoni, kunye nokuphelisa imfuno izityalo amandla amatsha 133.
Ngaba LED isetyenziswe dimmers?
Ngokuqhelekileyo, yebo. LED abaninzi zidweliswe ngqo njengokuba dimmable. Ezinye iinkqubo ukufiphala ukusebenza kunye LED ngcono kunabanye, ngoko ke kungcono ukuba ukuvavanya omnye okanye emibini ngaphambi ngokupheleleyo ukuphinda-Lamping isithuba.
Ukuba LED kusetyenziswa imidlalo zifakwe?
Hayi ukuba azifakwanga ngokupheleleyo. Ukuze libe LED ukuze isebenze ngokuchanekileyo, bamele babe ngumnyhadala non-list allo
Lwedilesi: 3rd Floor, D isakhiwo, 12 # Jinyuan indlela yokuqala, Heao, Henggang, kwisithili Longgang, Shenzhen, China
MIC 720w lignting for Austria stadi konogumbe ...
© Copyright - 2010-2018: All Rights Reserved. ibandla pcb
inkonzo lwabathengi online
wezemisebenzi lwabathengi online